प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई हप्काएपछि…. – Medianp
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई हप्काएपछि….
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २७, २०७५१०:०५
काठमाडौं, २७ चैत । सरकारी चिकित्सकले आकस्मिकबाहेक अन्य उपचार सेवा ठप्प पारेको बुधबार ६ दिन भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म सरकार र चिकित्सकबीच सहमति हुन सकेको छैन ।
सरकारी चिकित्सकले राखेको मागका विषयमा छलफल गर्न मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक बस्यो । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, स्वास्थ्यसचिव चन्द्रकुमार घिमिरे र सचिव डा. पुष्पा चौधरी सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी चिकित्सकका मागका विषयमा सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितसँग सोधेका थिए । ३० मिनेट छलफलमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्रीले डाक्टर समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाए । ‘मैले विशेषज्ञ चिकित्सकलाई संघमा राख्नु भनेको थिएँ । तपाईंहरूले किन नराखेको ?’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितलाई हप्काएको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्रीले हप्काएपछि मन्त्री पण्डितको अनुहार नीलो बनेको बताइन्छ ।
कर्मचारी समायोजनमा मन्त्री पण्डित निकै अनुदार देखिएका छन् । उनी सरकारी कर्मचारी वा डाक्टर सरकारले जहाँ खटायो त्यहीँ जानुपर्ने पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चिकित्सकहरूलाई पुल दरबन्दीमा राख्ने तयारी थालेको छ ।
‘संघमा नपरेका चिकित्सकलाई पुल दरबन्दीमा राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने विषयमा सरकार सकारात्मक देखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो । प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका डाक्टरलाई पुल दरबन्दीमा राखेर संघीय सरकारले आवश्यकता परेको स्थानमा पठाउन सक्छ । आज सरकारले यही विषयमा सरकारी चिकित्सक संघसँग वार्ता गर्ने भएको छ ।
सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी डाक्टरले शुक्रबारदेखि आकस्मिकबाहेक सबै सेवा ठप्प पार्दा दैनिक १०औँ हजार बिरामी मर्कामा परेका छन् ।
छातीमा संक्रमण भएपछि ८३ वर्षीय दलाई लामा अस्पताल भर्ना
सुन्दर बनाइँदै ललितपुरको प्रसिद्ध गोदावरीकुण्ड, दुई वर्षभित्रै योजना पूरा हुने
जिल्ला नेतृत्व चयनपछि नेकपामा असन्तुष्टि बढ्यो, माओवादी पक्षका आठ सदस्य पदमा नबस्ने, नारायणकाजीको असन्तुष्टि